Kolontsaina sy Fizahantany : Nanavia ny olona ny « Carnaval de Madagascar » teny Mahamasina -
AccueilVaovao SamihafaKolontsaina sy Fizahantany : Nanavia ny olona ny « Carnaval de Madagascar » teny Mahamasina
Kolontsaina sy Fizahantany : Nanavia ny olona ny « Carnaval de Madagascar » teny Mahamasina
18/06/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Tafiditra amin’ireo hetsika hanamarihana ny fetim-pirenena. Notanterahina ny faran’ny herinandro teo, nandritra ny roa andro ny « Carnaval de Madagascar », izay nokarakarain’ny ofisim-paritry ny fizahantany eto Analamanga na Ortana. Nanavia ny olona ny nanaovana ny hetsika tetsy Mahamasina raha oharina tamin’ireo andiany teo aloha tetsy amin’ny araben’ny fahaleovantena. Somary vitsy ireo mpijery raha oharina amin’ny isan-taona. Na izany aza, dia nizara sehatra telo ny tetsy anoloan’ny kianjaben’i Mahamasina dia ny toerana natokana ho an’ireo kilalaon’ny ankizy, ny sehatra ho an’ny fampisehoana, ary ny tsenaben’ny faritra. Tao anatin’ny 2 andro dia nifandimby niaka-tsehatra ireo mpandray anjara avy amin’ny faritra samihafa naneho ireo karazan-dihy sy ny kolontsaina avy amin’ny faritra niaviany. Toa izany koa ireo taovolo sy ny fomba fitafy samihafa. Saika hita teny an-tsehatra avokoa ireo karazana gadona mampiavaka ny faritra tsirairay, niainga avy amin’ireo kalon’Imerina ka hatramin’ny salegy nandalo ny dombolo ; kilalaky, mangaliba…
Ny andro voalohany dia nanamarika ny « Carnaval de Madagascar » ny filaharam-be niainga teo anoloan’ny carlton, ary nihazo ny teo anoloan’ny kianjaben’i Mahamasina. Tao anatin’izany dia efa nampiseho ny ampahany tamin’ireo kolontsain’ny faritra niavian’ny mpandray anjara.
Teo amin’ny tsenaben’ny faritra kosa no nampisehoana ireo varotra fampirantiana nahitana ireo vokatra mampiavaka ny faritra tsirairay. Na ny vokatry ny tany, na ny vokatry ny asa tanana. Tanjon’ny Ortana amin’ity hetsika ity ny fisarihana ny rehetra, na teratany na vahiny, amin’ny fizahan-tany amin’ny alalan’ny fanehoana ny kolontsain’ny faritra.
Sehatra goavana kosa no teo anoloan’ny vavahadin’ny kianjaben’i Mahamasina, izay nisian’ny dihy mirindra ara-panatanjahantena. Nahasarika olona maro kosa anefa ny seho niarahana tamin’ny tarika Mage 4 ny sabotsy, ary nafanain’i Samoëla kosa ny omaly.
Manana ny soatoavina feno isika Malagasy, ary mbola fomba fiteny ho firariantsoa aza ny hoe “ho ela velona”, raha toa tojo amin’ ny famangiana na ihany koa fitsidihana havan-tiana amin’ ny fotoana rehetra. Noho izany ...Tohiny